Faarax C/qaadir "Waxaan ka xumahay in la xiro xilligaan Wariye Gurbiye oo qayb weyn ka ahaa..." - Jowhar Somali Leader
Home Somali Faarax C/qaadir “Waxaan ka xumahay in la xiro xilligaan Wariye Gurbiye oo...
Faarax C/qaadir “Waxaan ka xumahay in la xiro xilligaan Wariye Gurbiye oo qayb weyn ka ahaa…”
Wasiirkii hore ee Cadaaladda ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Faarax Sheekh C/qaadir ayaa codkiisa ku biiray baaqyada lagu dalbanayo sii deynta Wariye C/casiis Gurbiye oo ahaa Agaasime kuxigeenka Goobjoog, kaasoo Ciidamada Booliska ay ku xireen Saldhigga Booliska degmada Hodan.
Faarax C/qaadir ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xarigga wariye Gurbiye, isagoo xusay inuu qeyb weyn ka ahaa ololaha wacyigelinta cudurka Koronaha.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Xildhibaan Faarax C/qaadir:-
Maalmo ka hor ayaan ka qabygalay dood Cilmiyeed ku saabsan Aafada Koronaha iyo saamaynta uu ku leeyahay xaaladdeenna dhaqaale iyo Bulsho. Afkaaro qiimo badan ayeey soo jeediyeen ka qaybgalayaashii.
Waxaan ka sheegay dooddaas in xilliyada musiibooyinka madaxda looga baahan yahay inay raadiso cid kasta oo wax ka tari karta xalka musiibada.
Waxaan tusaale u soo qaatay in boqorkii Masar uu dalbaday in Nabi Yusuf ( calayhi salaam) xabsiga laga soo saaro, madaxna uu ka noqdo Qorshaynta saadka iyo maaliyadda si shan iyo toban sano looga badbaado musiibada soo socoto. Nabi Yusuf waxaa lagu soo xiray guriga boqorkaa oo is tusiyay inay ceeb isaga iyo xaaskiisa soo gaarayso haddaan Yusuf la xirin.
Waxaan ka xumahay in la xiro xilligaan Wariye “Gurbiye” oo qayb weyn ka ahaa ololaha wacyigelinta cudurka Koronaha. Waxayna ahayd inaan xabsiyada ka soo saarno haddeey jirto cid sida “Gurbiye” karti u leh inay ka qayb qaadato hakinta halista cudur kan.
Wali ma arag eedeynta lagu haysto wariyaha, waxaanse ogahay inay la taliyaal, safiirro iyo saaxiibbada Madaxweyne Farmaajo iyo RW Khayre ay ka mid yihiin kuwo aflagaaddo iyo anshax xumo kula kacay madaxweynayaashii ka horreeyay, ayna muuqato in maqaamkaas abaal marin loogu siiyay afxumadii iyo xushma darradii ay u gaysan jireen madaxdii hore.
Waxaan rajaynayaa in mowhibada Gurbiye “oo aan wali hadlin” siduu ku celcelin jiray, uu xorriyad u helo inuu hadlo.